रंगेली अनि पाक्योङका प्रशासनिक क्षेत्रहरुमा पूर्ण लकडाउन - The Sikkim Chronicle
SC Desk Feb 24, 20210217
SC Desk Feb 22, 20210275
Sherab Palden Bhutia Feb 23, 202102442
SC Bureau Jan 9, 20210582
SC Bureau Dec 19, 20200566
SC Bureau Jan 15, 2021066
SC Bureau Jan 2, 2021061
SC Bureau Jan 14, 2021053
Jul 14, 2020 - 11:01
राज्य सरकारले रंगेली अनि पाक्योङ सब्डिभिजन अन्तर्गतका क्षेत्रहरुमा पूर्ण बन्द (लकडाउन) गर्ने निर्णय गरेको छ। क्षेत्रमा संक्रमण फैलनबाट रोक्नको निम्ति 15 जुलाईको 6बजी बिहान उसो यी दुई क्षेत्रहरुमा पूर्ण लकडाउनको पालना गरिनेछ। मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा आज बसेको राज्य टास्क फोर्सको सभामा सो निर्णय लिइएको हो।
रंगेलीबाट 15वटा नयाँ कोभिड-19 मामलाको पुष्टि भएसँगै 14 जून बिहान रंगेली सब्डिभिजन रेड जोन घोषित गरिएको जानकारी सार्वजनिक भएको थियो। अहिलेसम्म सिक्किममा क्वारेन्टाइनबाहेक समुदायमा संक्रमण देखा परेको थिएन। अहिले देखिएको संक्रमणलाई राज्य सरकारले खूबै गम्भीरतापूर्वक लिएको छ।
संक्रमितमध्ये एक पुलिसकर्मी अनि एक स्वास्थ्यकर्मी पनि रहेका छन्। संक्रमितहरूमा विशेष ग्रेफका कर्मचारीहरु साथै सशस्त्र सीमा बलका जवान पनि रहेका छन्। ग्रेफको गाड़ीमा चढ़ेर रिनाक गएका एक व्यक्ति पनि संक्रमित पाइएका छन्। ग्रेफ क्याम्प क्षेत्रका छेउ-छाउ बस्ने स्थानीयहरुमा पनि संक्रमण पाइएको अनि उनीहरुमध्ये कोही गान्तोकसम्म पनि गइसकेका रहेछन् भनी स्वास्थ्य सचिव डा. पेम्पा टी. भुटियाले जानकारी दिएका छन्। एक व्यक्तिले एक मन्त्रीलाई समेत भेट गरेको मुख्यमन्त्री पी.एस. गोलेले गान्तोकको एउटा समारोहमा बोल्दै जानकारी गराएका हुन्। जिल्ला प्रशासनले ग्रेफ क्याम्पमा क्वारेन्टाइनको दिशानिर्देशको व्यापक उल्लंघन भएको पाएपछि 14 जुलाईभित्रै उत्तर दिने निर्देशका साथ कारण बताउ नोटिस जारी गरिएको बताएको छ।
लकडाउनको अवधिमा रंगेली अनि पाक्योङ सब्डिभिजनभित्र पर्ने क्षेत्रहरुमा सम्पूर्ण वाहन चलाचल निषेध रहनेछ। आपातकालीन वाहनहरुको चलाचलको निम्ति भने अनुमति दिइएको छ। राशन दोकान, दुधको दोकान मासु दोकान, एलपीजी लगायत अन्य आवश्यक सामग्रीका दोकानहरुबाहेक अन्य सबै दोकानहरु बन्द रहनेछन्।
यसका साथै सम्पूर्ण राज्यमा 15 दिनको निम्ति अन्तर्जिल्ला वाहन चलाचल साथै नागरिकहरुको आउ-जाउमाथि पनि अब रोक लगाइएको छ। निजी वाहन तथा दुई चक्के वाहनहरु भने अब चल्न पाउने छैनन्। केवल ट्याक्सीहरुलाई भने स्थानीय (लोकल) क्षेत्रमा मात्रै पुरानै जोड़-बिजोड़ नियममा चलाउने अनुमति दिइएको छ। खाना डेलीभरी गर्ने दुई चक्के वाहन साथै आवश्यक सामग्री ढुवानी गर्ने अनि आपतकालीन वाहनहरुलाई भने चल्न दिइने जानकारी गराइएको छ।
यस अवधीभरि राज्यका मन्त्री अनि विधायकको सरकारी आवासमा भेट्न जान रोक लगाइएको छ। निजी कम्पनीहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुमाथि सिक्किम प्रवेश निषेधित रहनेछ। केन्द्र सरकारका कर्मचारीहरुलाई भने सबै दिशानिर्देश पालना गर्दै सठिक स्क्रिनिंग गरेपश्चात मात्र प्रवेश दिइनेछ। चारै जिल्लाका एसपीहरुलाई एकदमै सतर्क रहेर स्थितिको निग्रानी गर्ने मुख्यमन्त्रीले आदेश दिएका छन्। फरेस्ट गार्ड अनि भिलेज गार्डहरुलाई पनि एसपीको निग्रानीमा अब पुलिस बलसँगै तैनाथ गरिनेछ।
पुराना सबै पासहरु अब मान्य रहने छैनन्। नयाँ पासहरु भने चिकित्सा सम्बन्धी आपातकालीन स्थितिमा मात्र केवल डी.सी.द्वारा जारी हुनेछ।
स्मरण रहोस्, रिनाक बजारलाई पूर्व जिल्ला प्रशासनद्वारा कन्टेन्मेन्ट जोन घोषित गरिएको छ। उत्तरमा निर्मल धाम र रिनाक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पूर्वमा अस्पताल फाटक, दक्षिणमा चार फाटक र एग्रीगाउँ फाटक अनि पश्चिममा सालघारी फाटकलाई यस जोनको सिमानाको रुपमा तोकिएको छ।
Bimal Thapa Jul 18, 20200538
Bimal Thapa Oct 4, 202001167
SC Desk Dec 9, 202001014
SC Desk Jun 18, 20200478
Sherab Palden Bhutia Feb 23, 202102492
SC Desk Feb 18, 20210654
SC Desk Feb 22, 20210285
SC Desk Feb 24, 20210223
SC Desk Feb 11, 20210399
Shradha R. Chhetri Aug 14, 20200351
SC Desk Dec 2, 20200914
admin Sep 1, 20200916
SC Desk Jul 2, 20200339